के तपाईंले याद गर्नुभएको छ ! फोरके स्क्रिन रेजोलुसन साना साइजका टेलिभिजनमा हुँदैन ?
सामान्यतया टेलिभिजन किन्ने विषयमा हामीले ध्यान दिने भनेको स्क्रिन साइज र रेजोलुसनका कुरा हुन् । समय र प्रविधिको विकाससँगै टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने सामग्रीलाई अझ बढी प्रभावकारी र स्तरीय देखाउन समयसँगै विविध प्रयोग भएको पाइन्छ ।
एन्ड्रोइड डिभाइसको सुरक्षाको लागि आवश्यक केही सेटिङ र टिप्स
स्मार्टफोन अब सञ्चारको माध्यम मात्र रहेन ,अब यो हाम्रो वालेट, हाम्रो फोटो एल्बम अनि हाम्रो बैंक पनि भइसक्यो । यस्ता कारणले गर्दा स्मार्टफोन हाम्रा लागि निकै नै महत्त्वपुर्ण बन्दै गइरहेको छ ।
अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने सरकारको योजनाले केही वर्षदेखि चर्चा पाउँदै आएको छ । तर अहिलेसम्म ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । सम्भाव्यता अध्ययन तथा अनुसन्धान, परामर्शदाता नियुक्तिजस्ता प्रक्रियागत काममै स्याटेलाइटको चर्चा अल्झिएको छ ।
होन्डाको नाममा म्यासेन्जरमा आतंक : नखोल्नुहोला यस्तो लिङ्क
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरञ्चार प्राधिकरणले अब देशका सम्पूर्ण सामुदायिक क्याम्पसमा निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारको नीतिगत निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमार्फत याे कार्यक्रम अघि बढाएको हो ।
मानिसलाई फेरि चन्द्रमा पुर्‍याउने नासाको रकेट
चिनियाँ ह्याकरले नेपाल टेलिकमको सर्भर ह्याक गरेको आशंका
चिनियाँ ह्याकरले नेपाल टेलिकमको सर्भर ह्याक गरेको आशंका गरिएको छ । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनीले प्रयोग गरेको ओराकल ग्लाश फिश सर्भर ह्याक गरी चिनियाँ साइबर अपराधीहरूले कल डेटा रेकर्ड (सीडीआर) समेत चोरी गरेको दाबी गरेका छन् ।
विशाल पहाडभित्र बन्दैछ १० हजार वर्षको समय बताउने घडी
कम्प्युटर वैज्ञानिक ड्यानी हिलिसको परिकल्पनालाई वास्तविकतामा परिवर्तन गर्दै अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोसले १० हजार बर्षको घडी तयार बनाइरहेका छन् । हिलिसले यो १० हजार लामो समयको घडीको परिकल्पना सन् १९८६ मा नै गरेका थिए ।
विदेशबाट आयात गरिएको मोबाइल फोन 'नेपालमा नचल्ने , फोन दर्ता कसरी गर्न सकिन्छ? हेर्नुहोस
आगामी साउन १ गतेबाट अवैध रूपमा विदेशबाट आयात गरिएको मोबाइल फोन ''नेपालमा नचल्ने'' नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सञ्चालनमा आएसँगै त्यस्ता फोन नियमन गर्न सकिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा एउटा शक्तिशाली साइबर हमला हुँदा करिब २०० वटा व्यवसायहरू प्रभावित भएका छन्। साइबर सुरक्षा कम्पनी 'हन्ट्रेस ल्याब्स' का अनुसार ह्याकरहरूले मायामिमा मुख्यालय रहेको प्रविधि कम्पनी कसेयालाई निशाना बनाएका थिए।
स्लोभाकियामा उड्ने कार : उडान परीक्षण सफल
आवश्यकता अनुसार विमान वा कारको रूप धारण गर्न सक्ने एयरकारमा बीएमडब्ल्यूको इन्जिन र पेट्रोल पम्पको साधारण इन्धनमा चल्छ। यसका निर्माता प्राध्यापक स्टेफन क्लेनका अनुसार एयरकार १,००० किलोमिटरसम्म ८,२०० फिटको उचाइमा उड्न सक्छ। यो अहिलेसम्म परीक्षणका लागि हावामा ४० घण्टा उडिसकेको छ।
नेपालमा पनि डिजिटल भिसा प्रणाली लागू
काठमाडौं । नेपालमा पहिलोपटक डिजिटल भिसा प्रणाली लागू भएको छ । ४५ वर्षदेखिको हस्तलिखित भिसा प्रणाली प्रतिस्थापन गर्दै गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले डिजिटल भिसा प्रणालीको शुभारम्भ गरेका हुन् । आज अध्यागमन विभागमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री पौडेलले क्यूआर कोडसहितको प्रिन्टेड भिसा प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै पोर्चुगलका नेपाली मूलका नागरिक तेन्जिङ नोर्बु लामालाई भिसा प्रदान गरेका छन् । क्यूआर कोडसहितको प्रिन्टेड भिसा प्रणालीमा कम्युटरमा प्रविष्ट गरिएका विवरणका आधारमा नेपाली पोर्टले नै भिसा उत्पन्न गरी भिसा स्टिकर छपाइ गर्ने हुँदा त्रुटि हुने सम्भावना कम हुन्छ । सँगै सेवा प्रबाह पनि छिटो छरितो हुने अध्यागमन विभागले जनाएको छ । अब नेपालको भिसा अन्तरर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको हुनेछ । यो सेवा निकट भविष्यमै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय र देशभरका सबै अध्यागमन कार्यालयमा समेत विस्तार गरिने विभाग योजना छ । डिजिटल भिसा शुभारम्भ कार्यक्रममा गृहमन्त्री पौडेलले नेपालको भिसा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भएको भन्दै यसले देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत सकारात्मक योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
यसरी डाउनलोड गर्नुहोस् विण्डोज ११ भर्सन
विभिन्न नयाँ फिचर सहित भर्खरै विण्डोज ११ को घोषणा भएको छ । यदि तपाईं विण्डोज प्रयोगकर्ता हो भने पक्कै पनि यसलाई प्रयोग गर्ने हुटहुटी तपाईंमा पनि हुनसक्छ ।
तपाईंको कम्प्युटरले विण्डोज ११ सपोर्ट गर्छ ? यसरी थाहा पाउनुहोस्